Epreli 2021-Funda ukuRhweba
I-Dola yaseMelika ibuyisa kwakhona kwixabiso elifanelekileyo lokunyuka kwamaxabiso kwi-PCE njengoko i-EURO iyehla ngenxa yeDatha ye-GDP eDibeneyo
Emva komelele kakhulu kunokuba kulindelwe iziphumo zokunyuka kwamaxabiso kwi-PCE, idola yafunyanwa kwangoko kwiseshoni yaseMelika. Kodwa, okwangoku, idola yaseCanada yomelele ngakumbi, njengoko kubonisiwe ngamanani eGDP. I-yen iyachacha, enkosi ekuthinteleni umngcipheko omncinci kunye nokwehla kwesivuno esincinci eJamani naseJapan. Izidwangube zaseYurophu kwelinye icala zibuthathaka. Idatha ye-Eurozone's GDP idityanisiwe, engahambi kakuhle kwimali.
Ngokobuchwephesha, ingqalelo iya kuphinda ijolise kumanqanaba amancinci okuchasana nedola ukubona ukuba ingaba ilungele na ukuba namandla xa kubuya iimarike ngoMeyi. Ngo-Matshi, umvuzo wobuqu e-United States unyuke nge-21.1% mama, okanye nge-4.21 yezigidi zeedola, engaphezulu kokulindelweyo ngama-20.0% omama. Iindleko zonyuke nge-4.2% mama, okanye nge-616 yezigidigidi zeedola, ezingaphezulu kokulindelweyo kwe-3.8% MoM. Isihloko sokunyuka kwamaxabiso se-PCE sikhawulezise ngokukhawuleza saya kwi-2.3% YoY, xa kuthelekiswa ne-1.5% yeYO, ngaphezulu kokulindelweyo kwi-1, 6% YoY Core inflation PCE nayo yenyuka yaya kwi-1.8% YoY isuka kwi-1.4% YoY, ngaphezulu kokulindelwe yi-1.8% YoY.
I-Eurozone GDP yehlile -0.6% QoQ kwikota yokuqala, ingcono kunokuba bekulindelekile -0.8% QoQ. I-EU GDP ikhontrakthi -0.4% QoQ I-Eurozone GDP yehle nge -1.8% y / y ngonyaka, ngelixa i-EU ikhontrakthi -1.7% q / q. Phakathi kwamazwe angamalungu e-EU apho idatha yekota yokuqala ka-2021 ifumanekayo, ukwehla okukhulu kuthelekiswa nekota yangaphambili kwabhalwa ePortugal (-3.3%), kulandele iLatvia (-2.6%) kunye neJamani (- 1.7%) , kunye neLithuania. (+ 1.8%) kunye neSweden (+ 1.1%) kurekhodwe ukukhula okuphezulu. Izinga lokukhula lonyaka belingalunganga kuwo onke amazwe ngaphandle kweFrance (+ 1.5%) kunye neLithuania (+ 1.0%).
Phakathi kweJapan kunye neDatha yaseTshayina, amaMakethi aseAsia ahlala kwiNdlela yokuCima uMngcipheko
Ngaphandle kwamandla edola yaseMelika, iimarike zezemali eAsia zithengisa ngomngcipheko ophakathi namhlanje. Ukukhutshwa kwedatha elungileyo yezoqoqosho evela eJapan nase China khange kwenze nto ukukhulisa ukuthembana. Inombolo erekhodiweyo yaseIndiya yosulelo lwe-coronavirus ilothuse ilizwe lilonke. Ngokubhekisele kurhwebo lotshintshiselwano lwangaphandle, i-yen kunye nedola kulindeleke ukuba zibe zezona zibuthathaka, ngelixa iidola zaseCanada naseNew Zealand ziya kuba zezona zinamandla.
Imveliso yezorhwebo eJapan inyuke nge-2.2% m / m ngo-Matshi, ingcono kakhulu kunokuba bekulindelwe ukwehla kwe-2.0% m / m. Ngokophando olwenziwe nguNgqongqoshe wezoQoqosho, ezoRhwebo, kunye neMizi-mveliso, imveliso kulindeleke ukuba ikhule ngamanye ama-8.4% ngo-Epreli ze inyuke nge-4.3% ngoMeyi. Izinga lokungaqeshwa lehle laya kwi-2.6% ukusuka kwi-2.9%, ngcono kunokuba bekulindelwe kwi-2.9%. Ukuqala kwezindlu kunyuke nge-1.5% y / y, xa kuthelekiswa nolindelo lwakho -7.4%.
Ukuzithemba kwabathengi kwehle kuma-34.7 ukusuka kuma-36.1, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-34.0. E-Tokyo, i-CPI engundoqo iwele kwi-0.0% YoY ukusuka kwi-0.3% YoY, isilela kulindelo lwe-0.3% YoY.
Igosa elisemthethweni lokuThengisa i-NBS e-China lehle laya kwi-51.1 ngo-Epreli ukusuka kwi-51.9, ngaphantsi kwengqikelelo ye-51.4. I-PMBS engekho kwimveliso ye-PMI iwele kwi-54.9 ukusuka kwi-56.3, ngaphantsi kwe-52.6 yayo. "Ezinye iinkampani ekwenziwe udliwanondlebe nazo zithi iingxaki ezinje ngokunqongophala kwe-chip, iingxaki zamalungiselelo aphesheya, ukunqongophala kweekhonteyina, kunye nokunyuka kweempahla." utshilo u-Zhao Qinghe we-Statistics. Imveliso yeCaixin ye-PMI inyuke yaya kwi-51.9 ukusuka kwi-50.6, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-50.9.
tags Euro, KwiDola yaseMelika
Ukulandela ukuphakama okutsha koNyaka kwe-132.36, i-EURJPY ihlala phantsi koXinzelelo phakathi kwe-GDP ebuthathaka yaseJamani
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Epreli 30
Emva kokufikelela kumgangatho ophakamileyo wonyaka kwinqanaba le-132.36 ngexesha leseshoni yangoLwesine, i-EURJPY iyarhweba ngokuzikhusela. Ithathe amanyathelo afanelekileyo phantse ngo-Epreli. I-EURJPY ihlala iphantsi koxinzelelo phakathi kwe-GDP ebuthathaka yaseJamani encipha nge-1.7 yepesenti kwikota yokuqala, eyayimbi kakhulu kunokuba bekulindelwe.
Amanqanaba okumelana: 133.00, 132.50, 132.00
Amanqanaba enkxaso: 131.00, 130.68, 130.00
I-EURJPY iyarhweba phakathi kwe-131.00 uphawu, kodwa ngaphantsi kwencopho yamva nje. Esi sibini sifikelele kubude bemihla ngemihla malunga ne-132.19 ngaphambi kokuhlala kwi-131.45 ngelixesha lesithuba. Umnqamlezo ngoku uphulukana neepesenti ezingama-0.26 kwi-131.68 kwaye ujongana nenkxaso kwi-131.40, emva koko yi-131.00 (inqanaba lezengqondo). I-bounce ngaphezulu kwe-132.36 (ephezulu ngonyaka ngoFebruwari 25), kwelinye icala, iya kufikelela phezulu ngaphezulu kwe-132.50 yokubamba.
Ukujonga umfanekiso obanzi, ngelixa lingaphezulu komndilili ohambayo 5 kwinqanaba le-129.80 imbonakalo yomnqamlezo kufuneka ihlale iyakha. Isalathiso samandla esihlobo senze i-bearish divergence pattern ngelixa ixabiso lingaphantsi komqobo othe tyaba kwi-132.50. Esi sibini sinokuqhubeka nokuwa njengeebhere zijolise kwinkxaso elandelayo kwinqanaba le- $ 131.00.
I-intraday bias kwi-EURJPY itshintshiwe kancinci kwi-Channel esecaleni kunye nokubuyela umva ngoku. Okwangoku, ukudityaniswa okuthile kunokubonwa ngaphantsi kwe-132.36 ephezulu yethutyana. Kodwa ezinye iindlela zokurhweba zilindelwe ixesha elide njengoko inqanaba le-131.00 elichasayo liguqula inqanaba lenkxaso ligcinekile.
Kwicala elingaphezulu, ngaphezulu kwenqanaba le-132.36 inokuqalisa kwakhona imeko yokunyuka kwi-128.29 ukuya kwi-130.68 ukuya kwi-129.56 ukusuka kwi-130.20 kwinqanaba le-132.50 elilandelayo. I-EURJPY nayo ihambile ngaphezulu komndilili ohambahambayo we-5 kunye ne-13 ngelixa i-4 yeyure ye-RSI ihamba ngaphezulu komgca wayo ongathathi hlangothi. Esi sibini sinokuphinda siqhubeke ngokunyuka ukuya kwinqanaba le-132.50.
I-GBP / JPY ikuLungiso oluPhezulu, uye phezulu ushukume ngokuLungileyo
Amanqanaba okuGxila aphambili: 150.000, 152.000, 154.000
I-GBP / i-JPY yeXabiso lexesha elide: Ukutshintsha
IGBP / JPY Okwangoku imeko esecaleni. Ukusukela nge-11 ka-Matshi, isibini semali besisokola ukuphuka ngaphezulu kwenqanaba le-152.500. Esi sibini siphinde saliphinda inqanaba lokumelana nezihlandlo ezingaphezu kwesithathu. Ngomhla ka-Epreli 6 ukuxhathisa kwaphulwa kodwa amandla okonyusa amandla awazange azinze. Ngeli xesha, ngo-Epreli 6, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ngama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iphawundi iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye ukuphakama okungama-160.86.
I-GBP / JPY inyuke yaya kwinqanaba lama-56 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aHlanganisiweyo 14. Oku kubonisa ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa uptrend.
I-GBP / JPY Ithuba leXesha eliPhakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba ecaleni. Esi sibini siphinde saphinda saphikisana ne- $ 152.00 kabini kodwa sagxothwa. Namhlanje, imarike iyawa emva kwenqanaba lokuphinda uhlole i-152.500. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, isibini semali siya kuwa kwinqanaba le-149.50 emva kokuzama kwakhona indawo yokuchasana.
I-GBP / JPY -4 Itshathi yeYure
Isibini se-GBP / JPY singaphantsi kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukuhamba ecaleni.
Isibini se-GBP / JPY okwangoku sihamba phezulu. Esi sibini siya kuphinda sinyukele phezulu ukuba ukunganyangeki kwinqanaba le-152.500 kwaphuliwe. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kunyuka iye kwi-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye i-160.86 ephezulu.
Imiceli mingeni ye-GBP / JPY Indawo yokuhlangana!
I-GBP / JPY yehle ngamandla kwixesha elifutshane kwaye ngoku icinezela indawo yenkxaso. Kuyathengiswa nge-151.41 ngexesha lokubhala ngezantsi kuthelekiswa ne-152.40 ephezulu izolo.
I-Yen yaseJapan ingaqala ukwehla kwakhona ukuba i-Nikkei (JP225) itsibe ngaphezulu emva kokuhla kwayo okuncinci. Iponti isenamandla okunyusa ngokuchasene neentshaba zayo, ke inokuphinda ikhokele kwakhona.
Uhlalutyo lobuGcisa lwe-GBP / JPY H4!
I-GBP / JPY yehle kancinci ukusuka ngaphezulu kwe-151.98 ephezulu yangaphambili. Ngoku ibuyisele kwakhona i-R1 (151,36) yeveki, umgca ophakathi (lml), kunye nomgca wesilumkiso owaphukileyo (WL1).
Sinendawo yokuhlangana eyomeleleyo ekudibaneni kwamanqanaba enkxaso akhankanyiweyo. Ke, ukwaliwa okanye ukwahlulwa kubuxoki kungathumela ireyithi ephezulu kwakhona kwixesha elifutshane.
Ukophuka okungamanga okanye ukwaliwa kwindawo yokudibana kunokuzisa ukujiya okuphezulu ngaphezulu kwixesha elifutshane.
tags GBPJPY, i-JPY, Uhlalutyo Technical
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso lokuqhekeka kwinqanaba le- $ 599, lijolise kwi-663 yeedola
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Epreli 30
Ukonyuka okuthe kratya kubathengi kuya kuyityhalela i-Binance Coin kwinqanaba lokumelana ne- $ 663 kwaye ukuba isibane sezibane mihla le sivale ngaphezulu kwayo, ke ixabiso lingonyuka ngakumbi ukuvavanya amanqanaba oxhathiso lwama- $ 758 kunye ne- $ 850. Ukungakwazi ukwahlula inqanaba lokumelana ne-663 yeedola ziinkunzi zeenkomo, i-BNBUSD iya kuncipha iye kumanqanaba enkxaso nge- $ 599, $ 503, nakwi- $ 420.
Amanqanaba okumelana: $ 663, $ 758, $ 850
Amanqanaba enkxaso: $ 599, $ 503, $ 420
Iinkunzi zeenkomo zongamela iibhere kwimarike ye-BNBUSD. Ingqekembe ibiphantsi koxinzelelo lwabathengisi kwiveki ephelileyo kwaye oku kunciphise ixabiso kwinqanaba lenkxaso kwi $ 503. Abathengi baphazamisa abathengisi kwinqanaba lenkxaso elikhankanyiweyo kunye nokwenziwa kwekhandlela lokunyusa ikhandlela. Ixabiso lityhalelwa phezulu ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 599. Namhlanje, ixabiso liphule inqanaba lokumelana elikhankanyiweyo. Ixabiso libhengeza ukuya kwinqanaba lama- $ 663.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, Epreli 30
I-Binance Coin ingene kumndilili wokuhamba ngokukhawuleza kunye nomndilili wokuhamba kancinci; ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA abonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zilawula imarike yemali yeBinance. Ixesha lesalathiso samandla ahlobene namanqanaba 14 akumanqanaba angama-70 kunye nemigca yemiqondiso ekhombe phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga. Ukonyuka okuthe kratya kubathengi kuya kuyityhalela i-Binance Coin kwinqanaba lokumelana ne- $ 663 kwaye ukuba isibane sezibane mihla le sivala ngaphezulu kwayo, ke ixabiso lingonyuka ngakumbi ukuvavanya amanqanaba oxhathiso angama- $ 758 kunye nama- $ 850 amanqanaba. Ukungakwazi ukwahlula inqanaba lokumelana ne-663 yeedola ziinkunzi zeenkomo, i-BNBUSD iya kuncipha iye kumanqanaba enkxaso nge- $ 599, $ 503, nakwi- $ 420.
I-BNBUSD inyusa kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lenkxaso le- $ 503 lithintele ukuhla okuthe kratya kwexabiso ngenxa yesantya esiphantsi se-bearish. Ixabiso lavavanya inqanaba nge-25 ka-Epreli, ingqekembe yeBinance iyajika kwaye inyuse ukophula inqanaba le- $ 599. Okwangoku isiya kwinqanaba lokumelana ne- $ 663.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngo-Epreli 30
Ixabiso lingene kumaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ejonge phezulu ngelixa ingqekembe ithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini ezibonisa ukwanda kokuqina kweenkunzi.
IPolkadot (DOT) ifumana kwakhona ngaphezulu kweNkxaso yeedola ezingama-28, iiNdawo zokuNyukela phezulu ngokuHamba kungekudala
Ukusukela nge-24 ka-Epreli, I-DOT pIrayisi yawela kwinkxaso yeedola ezingama-28 njengoko i-altcoin yaqala kwakhona phezulu. Ukuwa kwamva nje kubangelwe kukhatywa okuphezulu kwe- $ 48. Eyona nto iphambili kukuba ukusukela oko iPolkadot yafumana amaxabiso ayo kwi-40 yeedola, ukunyuka okuphezulu akunakwenzeka. Ingqekembe yanyanzeliswa ukuba ithengise ngaphantsi kweedola ezingama-40. Nge-5 ka-Epreli ne-17, abathengi batyhala ixabiso le-DOT ngaphezulu kweedola ezingama-40 kodwa amandla okonyusa abuyiswa. Namhlanje, iPolkadot inyuka ukuphinda i-40 yokuxhathisa. Ukuhamba emacaleni kuya kuqhubeka de kube ukuxhathisa okungange- $ 40 kwaphulwe ngokuqinisekileyo.
I-DOT / i-USD inyukele kwinqanaba lama-50 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye ukusukela nge-22 kaFebruwari xa ingqekembe yaqala kwakhona intshukumo ebophelelayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin iqale ngokutsha ukunyuka. Ngo-Epreli 28 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6%. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-DOT inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye ephezulu yeedola ezingama-37. I-DOT iyenyuka kwaye isondela kulwandiso lweFibonacci 1.272 oluya kuthi lubangele ukubuyela umva.
I-altcoin ingaphezulu kwe-80% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ixabiso le-DOT lisondela kwingingqi ethengiweyo yentengiso. Okwangoku, ixabiso le-DOT line-crossover ye-bullish. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphaya kweentsuku ezingama-50 ze-SMA ezinika uphawu lokuthenga.
IPolkadot (DOT) iphinde yaqala ngokunyuka emva kokufumana ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 28. I-altcoin iyasokola ukugcina ngaphezulu kwe-40 yokuxhathisa. Imizamo yangaphambili yokugcina ngaphezulu kwe- $ 40 ephezulu isilele. Okwangoku, i-DOT inexabiso ekujoliswe kulo le- $ 58.23 ukuba uxinzelelo lwangoku luphuliwe.
Igolide (i-XAUUSD) yokuBala ukuNqatshwa kwinqanaba elikwi-1,800 yeedola, iQalela kwakhona ukuHamba okuMazantsi
igolide yayikwi-uptrend emfutshane njengoko intengiso yahlanganisana kwinqanaba eliphezulu le-1.797.72. Esi sibini sagxothwa kwindawo yokumelana ne-1,800 yeedola. Okwangoku, imakethi iyatshintsha ingaphantsi kwelona liphezulu kutshanje. Ngo-Epreli 8 uptrend; ikhandlela elibuyile lomzimba lavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-78.6% yeFibonacci. Ukufakwa kwakhona kubonakalisile ukuba iGolide iya kunyuka iye kwi-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo kunye nokubuyela umva. Ukusuka kumaxabiso entengo, ixabiso leGolide liyatshintsha kwinqanaba leFibonacci lokutshintsha okunokwenzeka.
Igolide ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba imarike ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso leXAUUSD likwicala elihamba ngaphantsi kwe-1,800 yeedola. Ixabiso leGolide liya kuwa ngalo lonke ixesha liphinda lizame indawo yokuchasana. Ngomhla wamashumi amabini anesithathu ku-Epreli, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-23% yeFibonacci. Oku kuthetha ukuba iGolide kulindeleke ukuba iwele kwinqanaba le-50 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba leedola le-2.0.
I-XAUUSD ingaphantsi kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Igolide ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Ixabiso leXAUUSD linokuthi liwe emva kokugatywa kwi-1,800 yokuxhathisa. Ngokwesixhobo seFibonacci, iGolide iya kubuyela umva kwi-78.6% yenqanaba lokubuyisela okanye inqanaba le-1,740 yeedola apho yaqala khona.